अध्यक्ष किस्मत जी ! ‘हार्न छुट छैन कि जित्न’ ? खोई राजीनामा – esetokhari.com
एमाले विवादको भूमरीमा, जिल्लादेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मका आआफनै गुट, प्रदेश सदस्यहरू पानीमाथिको ओबानो बन्दै
२०७९ जेष्ठ १९, बिहीबार १२:१४
नेपालगन्ज : स्थानीय तहको चुनाउअघि केपी ओलीशैलीमा बाँके एमालेका अध्यक्ष किस्मत कक्षपतिले नेता कार्यकर्तालाई एउटा उर्दी जारी गरेका थिए । ‘चुनाउमा हार्न कसैलाई पनि छुट छैन ।’
तर, बिडम्बना उनको उर्दीको विपरित बाँकेमा जित्न कसैलाई छुट भएन । सबै पालिकामा एमाले पत्तासाप भयो । यतिसम्मकी उर्दी जारी गर्ने उर्दीकर्ताले नै खजुरा गाउँपालिकामा पराजय भोग्नु परेको छ ।
खजुरा र यहाँको वडा नम्बर चार हारे पदबाटै राजीनामा दिने घोषणा समेत गरेका किस्मतले अहिलेसम्म राजनीनामा दिने संकेत देखाएका छैनन । नेता कार्यकर्ता र एमालेका शुभचिन्तकले घोषणा अनुसारको काम खोई भनि प्रश्न गर्दा उल्टै जंङ्गीदै किन राजीनामा दिने भनि प्रति प्रश्न पो गर्छन ।
हुनत नैतिकतै नभए कसको के लाग्छ र । उनी र एमालेका जिम्मेवार पदाधिकारीमा यतिबेला नैतिकताको खडेरी देखिएको छ । जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी मात्रै नभई बाहिर ठुला कुरा गर्ने प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूको मौनताको त कुरै छोडौ ।
चुनाउ जिते मैले गर्दा भन्ने केही प्रदेश कमिटीका सदस्य अहिले आफुले कुनै जिम्मेवारी नपाएको भन्दै पन्छिन र पानीमाथिको ओबानो बन्न खोजिरहेको देखिएको छ ।
यतिबेला एमाले बाँकेमा केन्द्रीय सदस्य, नगर कमिटी पदाधिकारी, प्रदेश कमिटी र जिल्ला कमिटीका सदस्यको आआफनै ध्रुव बनेको देखिएको छ ।
नगर कमिटीले बुधबार गरेको विजयी जनप्रतिनिधी सम्मानमा केन्द्रीय सदस्यलाई नबोलाएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यले आपत्ति जनाउँदै बुधबार नै भएको क्षेत्रीय भेलालाई समेत बहिस्कार गरेका छन । यसलेपनि नेताहरूको ध्रुविकरण प्रष्ट देखिएको छ ।
यी र यस्ता विविध घटनाले पनि यतिबेला आम एमालेका नेता कार्यकर्ताले बिशेष अधिवेशन र पदाधिकारी हेरफेरको माग गरिरहेका छन । तर, एमाले जिल्ला कमिटी बाँके बिशेष अधिवेशन गर्ने मनशायमा देखिदैन ।
बुधबार भएको क्षेत्रीय भेलामै एमाले जिल्ला कमिटी सदस्यहरू भास्कर काफ्ले, हरि तिमिल्सेना, राजेन्द्र कँडेल लगायत केही प्रदेश कमिटी सदस्यहरूले बिशेष अधिवेशनको मागसहित चुनाउ अघि अध्यक्ष कक्षपति लगायतका नेताले गरेका घोषणा अनुसार राजीनामा दिन माग गरेका थिए ।